Nwanyi Social entrepreneur? Tinye maka anyị Ike UN SDG llema Aka 2021 ($ 20,000)
Nwanyi Social entrepreneur? Tinye maka anyị Ike UN SDG Challenge 2021 ($ 20,000)
Ngwa na-emeghe maka mbipụta nwata nke 2021 zuru ụwa ọnụ Anyi na-enye UN SDG nsogbu aka.
Ebumnuche a bụ maka ụmụ nwanyị ndị ọchụnta ego na-elekọta mmadụ bụ ndị, site n'okwu ha, na-akwalite Ebumnuche UN Sustainable Development ma na-akpali obodo niile ime ihe iji wulite ụwa ziri ezi na 2030.
Banyere ANYI na-enye UN UNG nsogbu
A malitere webụ WE Power UN SDG Challenge maka ịkwanyere ndị isi ụmụ nwanyị ọhụụ sitere na ụwa niile na-eme ka SDG gaa n'ihu site na usoro azụmahịa na-adigide yana na-akpali ndị ọzọ ịgbaso ya.
Usoro ihe omume a na-egosipụta onyinye dị ịtụnanya ụmụ nwanyị ndị ọchụnta ego na ndị isi azụmaahịa nwere ike ịme iji zute SDGs ma dozie nsogbu kachasị na ụwa n'otu oge.
ANY Emp na-enye UN SDG nsogbu aka ọ bụghị naanị na ọ ga-amata ọrụ ha nwere nnukwu mmetụta kama ọ bụ inye ndị sonyere ọzụzụ ọzụzụ na ikike iji jikọọ na ntanetị zuru ụwa ọnụ na-enweghị atụ iji kwalite ụlọ ọrụ ha.
Olee otú ọ ga-esi arụ ọrụ
Maka mbipụta 2021 a, WE Empower Challenge Awardees ga-esonye na ihe omume gbara gburugburu UN General Assembly 76th wee zute ndị ọkachamara azụmaahịa ụwa si n'akụkụ ụwa niile.
Na mgbakwunye, ndị otu ga-esonye na asọmpi asọmpi siri ike, nke Diane von Furstenberg, onye ama ama ama ama ama n'ụwa niile, onye mmegide, na Vital Voices Board Member, kwadoro iji gosipụta azụmaahịa ha maka ohere ịnata $ 20,000.
Iji tozuo maka WE Ike UN SDG ịma aka, ị ga-emerịrị usoro niile a.
Bụrụ nwanyị ọchụnta ego nwere ikike idu ndú na azụmaahịa ma ọ bụ nzukọ nke na-arụ ọrụ kemgbe ihe karịrị afọ atọ;
Mee ma ọ dịkarịa ala ndị ọrụ oge niile atọ n'ọrụ;
Mepụta ahịa ma ọ bụ ego ha nwetara kwa afọ ma ọ dịkarịa ala $ 100,000 USD;
Nwee ike ikwu okwu na ide ede bekee;
Bụrụ ma ọ dịkarịa ala afọ 21;
Dịrị njikere ịga New York, NY, ma sonye na ihe omume niile site na Fraịde, Septemba 17 ruo Satọdee, Septemba 25, 2021 (Mgbochi njem njem nke COVID-19) NA ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dịnụ iji kere òkè na mmemme mmemme site na August site na Ọktọba 2021.
A ga-enyocha ndị na-achọ ọrụ dabere na ọtụtụ ihe, gụnyere echiche ndị na-esonụ.
nkwa: You ga-adị njikere itinye izu niile nke mmemme mmadụ na-eme (ikwe ka njem) ma ọ bụ mmemme mmemme emere site n'August ruo Ọktọba 2021 - enweghị ndị ọzọ.
Mmetụta: Ahịa gị ma ọ bụ nzukọ gị ga-enwerịrị mmetụta dị ukwuu na SDGs yana ọhụụ doro anya maka etu azụmahịa ha ga-esi mepụta ọdịnihu anyị chọrọ na 2030.
Ohere: Ndi oru gi ga-enweriri ike idozi mkparita uka nke obodo banyere oganihu ndi nwanyi na SDGs na mpaghara ha, ma nwee ikike di nkpa.
Ndị anamachọ ihe ga-eweta ozi dị mkpa gbasara onwe ha, azụmaahịa ha, na obodo azụmaahịa ha bụ isi. Rịba ama na ndị na-enyocha akwụkwọ ga-amata mpaghara ụwa ha nọ na mpaghara ndị a:
Europe na North America
Middle East na North Africa
Latin America na Caribbean
Ihe ị ga-atụ anya ya
N'ime oge itinye akwụkwọ anamachọihe a, ị ga-aza azịza maka etu ọrụ gị si metụta Ebumnuche Nkwado Sustainable Development United Nations, ọhụụ gị maka ọdịnihu na-aga n'ihu, yana otu ị ga - esi nyere aka zụlite nha anya nwoke na nwanyị site na ọrụ gị.
Ọzọkwa, a ga-ajụ gị ka ị zaa ọtụtụ ajụjụ nchekwa, nye ozi profaịlụ nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya (ọ bụrụ na ọdabara), ma kwenye usoro na ọnọdụ dị n'ime ụdị ntinye asọmpi.
N'ikpeazụ, a ga-achọ ka ị nyefee vidiyo nkeji abụọ site na iji ntuziaka ndị a.
Biko nyefee obere vidiyo nke onwe gị (kachasị nke nkeji abụọ) na-enye ozi ahụ na ịza ajụjụ ndị edepụtara n'okpuru, na Bekee. Ntinye vidiyo bụ akụkụ achọrọ maka asọmpi ahụ.
N'ime imepụta nzaghachi gị, biko cheta na etinyeghị nlebara anya na ogo vidiyo gị ma lebara anya na nzaghachi gị. A na-anabata ya, ọ bụrụ na-ịchọrọ, iji obere ekwentị mee obere vidiyo gị.
Ihe ị ga-aza na vidiyo gị
Kpọọ aha gị (aha mbụ na aha ezinụlọ gị)
Kwuo aha nzukọ gị na aha ọrụ gị
Kpọọ aha obodo azụmahịa gị dị
Gịnị bụ ebumnuche nke nzukọ gị?
Kedu ihe ị na-atụ anya inweta ma ọ bụrụ na ịhọrọ ịhọrọ isonye n'ikpeazụ a n'asọmpi a?
Kedụ mmetụta nke ihe omume gị na UN SDGs?
Esi edozi vidiyo gị
Enwere ike ịnwe mgbakwunye vidiyo na saịtị vidiyo dị ka YouTube ma ọ bụ Vimeo
I nwekwara ike bulite faịlụ vidiyo n'ime ngwa ngwa
Nha faịlụ ekwesịghị ịgafe 20 MB
Filedị faịlụ ndị a họọrọ bụ .MP4, .MOV, na .WMV
Ejikwala vidiyo gị tinye ihe ederede ọzọ, ebe ndị ikpe agaghị atụle ihe ndị a. Ihe edere ederede nke ntinye gị ga-akọwa ya nke ọma n'ime mpaghara mpempe akwụkwọ enyere.
2021 Anyị na-enye ike UN SDG Challenge ngwa ga-emechi na Tọzdee, Eprel 15, 2021. Tinye Ebe a, ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ gbasara mmemme ma ọ bụ usoro ntinye akwụkwọ, jiri nwayọ ziga ozi na [email protected] n'iji 2021 anyi mee ka UN SDG Challenge Application ka isiokwu.
SA Fintech Startup Revix na-emechi $ 4M maka Mgbasawanye EU